काठमाडौं : कुनै पनि देशको सेयर बजारकोे आकार थाहा पाउने प्रमुख माध्यम भनेकै त्यसको बजार पुँजीकरण हो । कुनै पनि मार्केटको ‘बजार पुँजीकरण’ (मार्केट क्याप) भनेको उक्त बजारमा सूचीकृत सेयरहरुको कुल भ्याल्यू हो । कम्पनीको कुल सूचीकृत सेयरलाई प्रतिकित्ता बजार भाउले गुणा गर्दा आउने रकम त्यस कम्पनीको बजार पुँजीकरण हुन्छ । र, सूचीकृत सबै कम्पनीको बजार पुँजीकरण जोड्ने हो भने समग्र बजारको मार्केट क्याप थाहा हुन्छ । सामान्य हिसाबमा यसलाई लगानीकर्ताको कुल सम्पतिका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
तसर्थ, बजार पुँजीकरणलाई सेयर बजारको आकार मापन गर्ने माध्यमका रुपमा लिन सकिन्छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुको सेयर बजारको आकार पनि ठूलै हुने गरेको छ । अर्को अर्थमा भन्न सकिन्छ कि अर्थतन्त्रको आकार र पुँजी बजारको आकारबीच सीधा सम्बन्ध रहने गर्दछ । पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मान्नुको कारण पनि त्यही हुन सक्छ । तसर्थ, यहाँ बजार पुँजीकरणका आधारमा विश्वका ६ सबैभन्दा ठूला सेयर बजारका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
१. अमेरिकी सेयर बजार
अ‍ेमरिकालाई हालसम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा चिनिँदै आएको छ । अमेरिकी सेयर बजारको इतिहास खोतल्न १८ औं शताब्दीमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सन् १७९२ मा केही व्यापारीहरुले गरेको ‘बटनवुड सम्झौता’ अहिले न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जको रुपमा चिनिएको छ । उक्त सम्झौतालाई अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजका रुपमा लिने गरिन्छ ।
यद्दपि, फिलाडेल्फिया स्टक एक्सचेन्ज अमेरिकाको पहिलो स्टक एक्सचेन्ज हो । बटनवुड सम्झौताले १८ औं शताब्दीमा धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित गरेर २१ औं शताब्दीको दुई दशक पूरा गर्दा अमेरिकी सेयर बजार विश्वकै ठूलो बजारको रुपमा स्थापित भएको छ ।
सेप्टेम्बर १७ सम्मको तथ्यांक अनुसार अमेरिकी सेयर बजारको कुल बजार पुँजीकरण १ हजार १९० खर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ । अमेरिकी सेयर बजारलाई सबैभन्दा विकसित बजारको रुपमा लिइन्छ । अहिले अमेरिकामा ३ वटा प्रमुख सेयर बजार सूचक रहेका छन् । ती हुन् ः डाउ जोन्स, एस एन्ड पी ५०० र नास्डाक ।
२. चिनियाँ सेयर बजार
चीनमा कुल सेयर बजार पुँजीकरण ५०९ खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनको सेयर बजार पनि दोस्रो स्थानमै परेको छ । चिनियाँ सेयर बजार विशेषगरी सांघाई स्टक एक्सचेन्जको वरिपरी रहने गरेको छ ।
जसको इतिहास १८ औं शताब्दीसम्म पुग्दछ । चीनको मुख्य सेयर बजार सूचकमा ‘सांघाई कम्पोजिट’ पदर्छ । त्यस्तै, सेन्चेन स्टक एक्सचेन्ज पनि चीनको प्रमुख सेयर बजारमै पर्ने गरेको छ ।
३. जापानी सेयर बजार
जापानको सेयर बजार सन् १८७८ मा स्थापना भएको थियो । हाल यसमा ३७ सय भन्दा बढी कम्पनीहरु सूचीकृत भएका छन् भने बजार पुँजीकरण ७३ खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी रहेको छ । जापानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सेयर बजार सूचक ‘निक्के २२५’ हो । यसलाई विकसित राष्ट्रहरु मध्येकै सबैभन्दा अस्थिर सेयर बजारको रुपमा लिने गरिएको छ ।
सन् १९८९ को डिसेम्बर २९ मा निक्के इतिहासकै उच्च ३८९१५.८७ विन्दुमा क्लोजिङ भएको थियो । त्यसयता, निरन्तर घट्दै सन् २००९ मा ७०५४.९८ विन्दुसम्म झरेको थियो । र, अहिलेसम्म पनि ३० वर्ष भन्दा अघिको अलटाइम हाई रेकर्ड तोड्न सकेको छैन । हाल भने निक्के ३०,००० विन्दु वरिपरी रहेको छ ।
४. हङकङको सेयर बजार
‘हङकङ स्टक एक्सचेन्ज (एचकेइएक्स)’ हङकङको प्रमुख सेयर बजार हो । जहाँ लगभग २६ सयको हाराहारीमा कम्पनीहरु सूचीकृत भएका छन् । हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ५० वटा ठूला कम्पनीहरुको दैनिक परिपर्तन मापन भने ‘हाङ सेङ सूचक’ मार्फत हुने गर्दछ । हाङ सेङ नै हङकङको प्रमुख सेयर बजार सूचक हो ।
यसले मापन गर्ने ५० वटा ठूला कम्पनीको बजार पुँजीकरणले मात्रै हङकङ स्टक एक्सचेन्जको कुल बजार पुँजीकरणको ५८% हिस्सा ओगटेको छ । सेप्टेम्बर २०२१ सम्म यो बजार विश्वको चौथो ठूलो पुँजी बजारको रुपमा स्थापित छ । जसको कुल बजार पुँजीकरण ६४ खर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।
५. बेलायतको सेयर बजार
सन् २०२१ सेप्टेम्बरसम्म बेलायतको सेयर बजारको कुल पुँजीकरण ३६ खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी रहेको छ । सन् १८०१ देखि सुरु भएको बेलायतको सेयर बजारलाई विश्वकै सबैभन्दा पूरानो बजारमध्ये एकमा चिनिन्छ । ‘एफटीएसइ’ बेलायतको प्रमुख सेयर बजार सूचक हो ।
जसले लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने सबैभन्दा ठूलो पुँजीकरण भएका १०० वटा कम्पनीलाई ट्रयाक गर्दछ । एफटीएसइले लण्डन स्टक एक्सचेन्जको कुल बजार पुँजीकरणको ८०% हिस्सा ओगट्छ ।
६. भारतीय सेयर बजार
पछिल्लो समय भारतीय सेयर बजार उच्च वृद्धितर्फ लम्किरहेको छ । यसले दैनिक नयाँ उचाई छुँदै गएको छ । बम्बे स्टक एक्सचेन्ज भारतको मुख्य सेयर बजारमा पर्दछ । ‘बीएसइ सेन्सेक्स’ ले भने बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत वित्तीय अवस्था मजबुत भएका ३० वटा कम्पनीहरुको मापन गर्दछ । सेन्सेक्स भारतको प्रमुख बजार सूचक हो । यस्तै, अर्को सूचक ‘निफ्टी ५०’ ले भने ‘नेसनल स्टक एक्सचेन्ज’ मा सूचीकृत ५० वटा ठूला कम्पनीहरुको औसत मापन गर्दछ । भारतका दुईवटै बजार सूचक अहिले इतिहासकै उच्च विन्दुमा छन् ।
सेन्सेक्सले शुक्रबार मात्रै ६० हजार विन्दु पार गरेको छ भने निफ्टी पनि १८ हजार विन्दु नजिक छ । भारतीय सेयर बजारको हाल कुल बजार पुँजीकरण ३५ खर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । हालैको एक प्रतिवेदनले सन् २०२३ सम्म भारतीय सेयर बजारले बेलायतलाई पछि पार्दै विश्वको पाँचौं ठूलो सेयर बन्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसको बजार पुँजीकरण पनि ५० खर्ब अमेरिकी डलर नाघ्ने प्रक्षेपण छ ।